Anadu House - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguMirag
I-Anadu House yindawo yokuhlala yabucala eyilwe kakuhle kwindawo ezolileyo enemibono emangalisayo ngaphesheya kwe-Fewa Lake ukuya kwi-Annapurnas emangalisayo. Lo mhlaba umi kwiimitha ezingama-30 ukusuka echibini, ngoko ke ukonwabele ukuhamba ngesikhephe, ukuhamba ngesikhephe, ukuloba njl.
I-Anadu House yindawo yokuhlala yabucala eyilwe kakuhle kwindawo ezolileyo enemibono emangalisayo ngaphesheya kwe-Fewa Lake ukuya kwi-Annapurnas emangalisayo. Lo mhlaba umi kwiimitha ezingama-30 ukusuka echibini, ekuvumela ukuba ukonwabele ukuhamba ngesikhephe, ukuhamba ngesikhephe, ukuloba kunye nokubona indawo.
iindawo zokubukela ezikufutshane zibandakanya i-World Peace Stupa (1,2 km), iMyuziyam yeNtaba yeZizwe ngezizwe (4,7) okanye iMahendra Cave (7,7 km).
4.50 out of 5 stars from 51 reviews
4.50 · Izimvo eziyi-51
Le ndlu ikwicala lelali ye-nepali, ejikelezwe yindalo kuphela, ezolile kakhulu.
Umbuki zindwendwe ngu- Mirag
ungakonwabela ngokupheleleyo ukuhlala kwakho ngeenkonzo ezinobubele zabasebenzi bethu basekhaya, kubandakanya nokulungiswa kokutya, ukuthenga, ukuhamba kunye nesikhokelo sayo nayiphi na into onokuthi uyithande.